गुगल एनालाइटिक्सको साथ WordPress लेखक द्वारा ट्र्याक गर्नुहोस्
सोमबार, फेब्रुअरी 8, 2010 आइतवार, अप्रिल २,, २०१। Douglas Karr
मैले गुगल एनालाइटिक्सको साथ WordPress मा बहु लेखकहरू कसरी ट्र्याक गर्ने भन्ने बारेमा अर्को पोष्ट लेखें एक पटक पहिले, तर यो गलत भयो! WordPress लूप बाहिर, तपाईं लेखकको नाम क्याप्चर गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ त्यसैले कोडले काम गरेन।
असफलको लागि माफ गर्नुहोस्।
मैले केहि थप डिगि। गरेको छु र बहु ​​गुगल विश्लेषक प्रोफाइलहरूको साथ यो कसरी चलाख व्यवहार गर्ने फेला पार्‍यो। (एकदम इमान्दारीपूर्वक - यो तब हुन्छ जब तपाईं पेशेवरलाई माया गर्नुहुन्छ विश्लेषण प्याकेजहरू जस्तै वेबट्रेंडहरू!)
चरण १: अवस्थित डोमेनमा प्रोफाइल थप्नुहोस्
पहिलो चरण भनेको तपाईको हालको डोमेनमा थप प्रोफाइल थप्नु हो। यो विकल्प हो जुन प्रायः व्यक्तिहरूसँग परिचित छैनन् तर यस प्रकारको परिदृश्यका लागि पूर्ण रूपमा काम गर्दछ।
चरण २: नयाँ लेखक प्रोफाइलमा समावेश फिल्टर थप्नुहोस्
तपाईं यस प्रोफाइलमा लेखकहरू द्वारा ट्र्याक गरिएको पृष्ठ दृश्यहरू मात्रै मापन गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसैले उपनिर्देशिकको लागि फिल्टर थप गर्नुहोस् / लेखक /। यसमा एउटा नोट - मैले अपरेटरको रूपमा "समावेश" गर्नुपर्‍यो। गुगलका निर्देशनहरू एक for का लागि फोल्डर भन्दा पहिले। वास्तवमा तपाई फिल्डमा write लेख्न सक्नुहुन्न!
चरण:: तपाईंको प्राथमिक प्रोफाइलमा बाह्य फिल्टर थप्नुहोस्
तपाईं वास्तवमै तपाईंको मूल प्रोफाइलमा लेखकद्वारा सबै अतिरिक्त पृष्ठ दृश्यहरू ट्र्याक गर्न चाहनुहुन्न, त्यसैले उपनिर्देशिकता बाहिर निकाल्न तपाईंको मूल प्रोफाइलमा फिल्टर थप गर्नुहोस्। / लेखक द्वारा /.
चरण:: फुटर स्क्रिप्टमा एक लूप थप्नुहोस्
तपाईंको अवस्थित गुगल एनालिटिक्स ट्र्याकिंग भित्र र तपाईंको हालको ट्र्याकपेजभ्यु लाइनमा तलको फुटर थिम फाईलमा निम्न लूप थप्नुहोस्:
var लेखकTracker = _gat._getTracker ("UA-xxxxxxxx-x"); लेखकTracker._trackPageview ("/ लेखक द्वारा / ");
यसले तपाईंको सबै ट्र्याकि capture क्याप्चर गर्दछ, लेखक द्वारा, तपाईंको डोमेनको लागि दोस्रो प्रोफाइलमा। तपाईंको प्राथमिक प्रोफाइलबाट यो ट्र्याकि exc समावेश नगरी, तपाईं थप अनावश्यक पृष्ठ दृश्यहरू थप्नुहुन्न। दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि तपाईंसँग posts पोष्टहरूको साथ गृह पृष्ठ छ भने, तपाईं यस कोडसँग page पृष्ठदृश्यहरू ट्र्याक गर्नुहुन्छ - प्रत्येक पोष्टको लागि एक, लेखकद्वारा ट्र्याक गरिएको।
यहाँ छ कि लेखक ट्र्याकिंगले कसरी त्यो विशिष्ट प्रोफाइल देख्नेछ:
यदि तपाईंले यो फरक तरिकाले पूरा गर्नुभयो भने, म लेखकको जानकारी ट्र्याक गर्न अतिरिक्त तरिकाहरूका लागि खुला छु! किनकि मेरो एड्सेन्स राजस्व प्रोफाइलसँग सम्बन्धित छ, मँ पनि हेर्न सक्दछु कुन लेखक सबैभन्दा विज्ञापन राजस्व उत्पन्न गर्दैछन् :)।
टैग: लेखकलेखक ट्र्याकिंगGoogle विश्लेषण
फेब्रुअरी १,, २०११ 8:१:2010 अपराह्न
उत्कृष्ट पोष्ट डग! यस स्तरमा लेखक ट्र्याक गर्न वैकल्पिक GA मा घटना ट्र्याकिंगको साथ हो। तपाईका प्रत्येक लेखकको पोष्टहरू कति पटक हेरिएको थियो भन्ने कुरा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, समान प्रोफाइलमा तपाईंको नियमित डाटाको रूपमा, पृष्ठ दृश्यहरू फुलाएको बिना। साथै, तपाई घटना रिपोर्टिंगमा धेरै आयामहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ कि कुन स्रोतहरू विभिन्न लेखकहरूमा आगन्तुकहरू ड्राइभ गर्दै थिए (उदाहरणका लागि ट्विटर मार्फत सबैभन्दा धेरै पाठकहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ), जहाँ उनीहरू आउँदैछन्, आदि। मैले स्क्रिप्ट पोष्ट गर्न प्रयास गरेँ, तर म चरित्र सीमा भन्दा माथि थियो। यहाँ लिंक छ: http://www.wheresitworking.com/2010/02/08/tracking-authors-in-wordpress-with-google-analytics-event-tracking/
डग, तपाईं जहिले पनि सहि पोस्ट सही समयमा राख्नुहुन्छ जस्तो देखिन्छ, म यसलाई हाम्रो इन्डियाना इनसाइडर ब्लगमा लागू गर्नेछु।http://www.VisitIndiana.com/blog/) आज!
मार्स 6, 2010 मा 2: 19 एएम
अति उत्तम, यस डग साझेदारीको लागि धन्यवाद! मैले फेला पारेको छु कि लेखकको नाम डुप्लिकेट र आउटपुट दुई चोटि रोक्नको लागि get_the_author () सँग प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक छ।
साथै, तपाईको समाधान आदमको तुलनामा कसरी तुलना गर्दछ?
जनवरी १, २०१ 27 १२::2011 अपराह्न
डग, मैले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरें, तर यो वास्तविक लेखक पृष्ठहरू (... / लेखक / AUTHORNAME) को दृश्य मात्र ट्र्याक गर्दैछ, र प्रत्येक पोष्टको हेराईहरू होइन, लेखकले छुट्टयाएको - कुनै विचारहरू?
मैले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तरिकाले वास्तवमा गुगल एनालिटिक्स (अलग यूए कोडहरू) भित्र दुई फरक खाताहरू प्रयोग गरिरहेको थियो। म एउटा खातालाई "लेखक" भन्छु र अर्को खातामा म सम्पूर्ण साइटको रूपमा राख्छु। समझ बनाउनु हुन्छ?
ओह, दुई बिल्कुल अलग यूए कोडहरू? मैले भर्खरै ब्लग युए कोड अन्तर्गत नयाँ प्रोफाइल सेटअप गरेको छु। म त्यो एक शट दिनेछु र यदि यसले मेरो लागि काम गर्दछ भने तपाईंलाई सूचित गर्दछ।
जुन 25, 2012 मा 2: 15 PM
धेरै धन्यवाद। म अहिले यो प्रयास गर्दैछु। यद्यपि एउटा चीज, मैले लुपबाट "इको" हटाए किनकि यसले लेखकको नाम नक्कल गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। उदाहरण को लागी / लेखक द्वारा / लेखक नेमअधिकार नाम इको संग देखा पर्दै थियो।
ट्यूटोरियल को लागी धन्यवाद। मलाई दृश्य ब्लगमा प्रत्येक लेखकले पृष्ठ दृश्यहरू ट्र्याक गर्न आवश्यक छ दृश्यमा भुक्तान गर्नका लागि।
गृहपृष्ठ समावेश सहित वास्तव मा काम गर्दैन, यद्यपि।
के तपाईं होमपेजबाट कोड हटाउन सक्नुहुन्छ? यदि त्यो कोड एकल-पृष्ठ लेआउटमा मात्र सम्मिलित गरिएको थियो भने (अनुकूलन वेबपृष्ठहरूमा एक विकल्प), के त्यसले काम गर्दछ? गृहपृष्ठ दृश्यहरू गणनाबाट बाहेक?
हामी वास्तवमा प्रयोग गर्दै आएका छौं Context.ly त्यसका लागि र यसले निकै राम्रो काम गरिरहेको छ।
मई 16, 2015 मा 8: 54 PM
तपाईं चरण १ कसरी गर्नुहुन्छ कृपया: "तपाईंको हालको डोमेनमा थप प्रोफाइल थप्नुहोस्"
तपाईं कसरी चरण पूरा गर्ने भनेर देखाउनुहुन्छ, तर कसरी पहिलो स्थानमा पुग्ने होईन।
मई 17, 2015 मा 9: 28 PM
तिनीहरू निश्चित गर्छन् कि यो सजिलो छैन, के त्यो जस्टिनलाई? यहाँ मा एक सिंहावलोकन छ Google विश्लेषण पृष्ठ।